🥇वजन कम गर्न सबै भन्दा राम्रो खेलहरू
तौल घटाउन , यो स्पष्ट छ कि तपाईंले खाना खानु पर्छ र, अझ खराब, व्यायाम! र यसलाई गर्न हामी राख्दछौं, हामी ती खेलहरू प्रस्ताव गर्दछौं जुन तपाईंलाई अझ बढी क्यालोरी छिटो बर्न बनाउनेछ । निस्सन्देह, उनीहरूले निम्त्याउने कुनै साइड इफेक्टका लागि हामी जिम्मेवार छैनौं (कम्तिमा: लेसहरू)। यस जीवनमा यति धेरै चीजहरू जस्तै, एक व्यक्तिले कसरी एउटा अवसरहरू मापन गर्ने भनेर थाहा पाउनुपर्दछ र यसलाई अधिक नबनाउनुहोस्।
ठीक छ, रोइ।। प्रति घण्टा करीव १००० क्यालोरी गुमाएर, वजन कम गर्न, पछाडि मांसपेशीहरू (पृष्ठीय, काठ, ट्रापेजियस, काँध), बाइसेप्स र एब्सहरू विकास गर्न रोइ row the सबैभन्दा प्रभावकारी खेल हो। यदि तपाईं घरबाट बाहिर अभ्यास गर्न धेरै टाढा बस्नुहुन्छ भने, त्यहाँ उपकरणहरू छन् जुन अभ्यास पूर्ण रूपमा नक्कल गर्दछ।
स्क्वाश को एक घण्टा बराबर 900 क्यालोरी कम। सम्पूर्ण शरीर यो खेल मा काम गर्दछ। स्क्वाश तपाईंको प्रतिरोध अभ्यास र सबै भन्दा राम्रो डिओडोरन्ट परीक्षण गर्दछ ...
यो छ आफ्नो बहिनी या आफ्नो भान्जी संग डोरी कूद, तर अभ्यास रूपमा गर्न बारेमा द्वारा को मुक्केबाज। एक घण्टा 800०० र 900 ०० क्यालोरीको बीचमा बल्छ। थप रूपमा, खुट्टा, खुट्टा, र ढुocks्गा प्रबलित छन्।
ठीक छ, यो हिंस्रक छ, र दन्त सुरक्षा, हेलमेट र ग्लोभले मनपर्दैन, तर बक्सिंगको एक घण्टामा 700०० क्यालोरी भन्दा कममा तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ ...
प्रत्येक घण्टा पौंडी खेल्ने मतलब 500०० र cal०० क्यालोरी कम। थप रूपमा, पौडी खेल्ने खेल हो जुन उत्तम रूपमा मांसपेशीहरू र छिटोको विकास गर्दछ । वा तपाईंले कहिले पनि याद गर्नुभएन कि एक पौडी कत्ति राम्रो छ, वा एक पौंडीको मत्स्यांगना शरीर।
समुद्र तट भलिबलको एक घण्टाले तपाईंलाई करीव 500०० क्यालोरीहरू मेटाउन मद्दत गर्दछ। र यदि तपाइँ मिश्रित टोली पनि गठन गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ स्विमूट सूट वा सुन्दर बिकिनी एथलिटहरूमा केटाहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यो एक दुई मा छ!
यदि तपाईं हिउँ मौसममा छुट्टिहरू बनाउन सक्नुहुन्छ भने, उत्तम घण्टामा तिनीहरूलाई समर्पण गर्ने उत्तम तरिका, प्रति घण्टा cal०० क्यालोरीको दरमा। तर हे, हामी अल्पाइन स्कीइ aboutको कुरा गर्छौं: के यसको लायक छैन जुन स्लेडिding वा स्नोबल लडाई हो ...
यो सुरक्षित मूल्य हो: बाइक सवारीको एक घण्टाको लागि cal०० क्यालोरी। सबै भन्दा राम्रा फिलाहरू र सबै भन्दा बढि बाछोहरू खेल्ने यो खेल हो।
दुबै जाडो र गर्मीमा, घर भित्र वा बाहिर टेनिस सबैभन्दा "ठाडो" खेलहरू मध्ये एक हो। तिनीहरू प्रति घण्टा 400०० र cal०० क्यालोरीहरू गुमाउँछन्। जो एक्लै खेलहरू गर्न चाहँदैनन् वा साथीहरू बनाउनको लागि यस पलको फाइदा लिन चाहन्छन् तिनीहरूको लागि आदर्श।
क्लासिक: दौडँदै । एक घण्टाको लागि, लगभग 400 क्यालोरी कम। कपालबाट स्नीकर्सलाई बचाउनको लागि राम्रो कारण। तपाई केको लागि प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ?
हामीले उच्चतमदेखि न्यूनतम क्यालोरी / घण्टाको संख्या आदेश दियौं जुन हरेक उत्तम खेलको साथ हराउन सक्छ वजन कम गर्न । सबैजना जो आफूले चाहेको छनौट गर्दछन्, तर हो, उचित सावधानीका साथ हामी मध्येका केही एकदम कच्चा हुन्छौं र हामी आफैंलाई तयारी नगरी नै हिर्काउँछौं, र त्यसपछि के हुन्छ। एक समीक्षा र, न्यानोपनको लागि ...
ओलम्पिक खेलहरूको सबैभन्दा राम्रो मस्जिट
ओलम्पिक खेलहरु को पालतू जनावर (1 971-2012-2012)
सबै भन्दा राम्रो 4X4 सबै इलाका ट्रक
सबै भन्दा राम्रो शिक्षा प्रणालीहरू
संसारमा सबै भन्दा राम्रो समुद्र तटहरू
कृषि ट्रयाक्टरहरूको सबै भन्दा राम्रो ब्रान्ड
Catalonia मा सबै भन्दा राम्रो समुद्र तट
पप संगीतको सबैभन्दा राम्रो गायक
संसारमा सबैभन्दा राम्रो ईगल प्रजातिहरू